Okokuqala, ukuxuba, 1 seta i-20L itanki yokuxuba; Isantya sokuxuba sinokuhlengahlengiswa; Umxhubi wokukhuhla asuse ngokulula kwaye enze kwakhona; Ixesha le-CW kunye nexesha leCCW lihlengahlengiswa; Itanki inokuvula i-90degree ukuba ikhutshwe ngokulula okwesibini, extrusion, 1 set 10L tank; Ukujija kwicala langasemva kwaye ucinezela ...
Ngo-2020, siya kwi-CBE efanelekileyo eShanghai ukususela ngoJulayi 8 ukuya ku-12. Sibonisa iimveliso zethu eziphambili, ezinje ngomatshini ojikelezayo wokugcoba imilebe, tyhala uhlobo lomlomo wokugcoba umatshini wokugcwalisa umatshini, umatshini wokucinezela umgubo, umatshini wokubhaliweyo othe tyaba, i-packagings yezithambiso yomlomo, ...
Siyila umatshini wokugcwalisa ojikelezayo we-Estee Lauder
Umzekelo EGSF-01A umatshini wokugcwalisa ojikelezayo ngumatshini wokugcwalisa oshushu ozenzekelayo owenzelwe ukuvelisa isiseko se-liquid kunye ne-toner gel. Isalathiso setafile yokujika eneepucks ezili-12, isikhululo esisebenza esi-3 Sine-4set ye-10 L yokufudumeza itanki ngomxhubi wokulayisha ipani / iibhotile ...
I-2020 kaDisemba Ukuhlaziywa komatshini wokucinezela umgubo wokuzenzekelayo
Ukucofa umatshini wokucinezela umgubo ungenza isithunzi samehlo, iblush, iindlela ezimbini zekhekhe, isiseko se cosmetic, ubuso obucofe umgubo. Umatshini wokucinezelwa komgubo wokucofa ungenza umgubo ojikeleziweyo kunye nomgubo ocoliweyo wesikwere kumatshini omnye. Umatshini wethu wokucofa umgubo wokucofa ulwelo luhlobo lwe rotary mac ...
I-2020 ngo-Okthobha kumatshini wokugcwalisa i-lip gloss, senza uhlengahlengiso malunga neetanki zokufudumeza zotshintsho ngaphezulu
Ngokwemfuneko evela kubathengi, senza umatshini wokugcwalisa imilebe ngomlomo ngetanki yokufudumeza. Itanki yokufudumeza ixhotywe ngesixhobo sokuxhuba kunye noxinzelelo ukongeza uxinzelelo kulwelo olunombonakalo ophezulu wokuhamba kakuhle xa uzalisa. Itanki yokufudumeza itanki yebhatyi, phakathi yi-heatin ...